i-android 10 nge-ui 2.0 enye kwi-samsung galaxy s10 +: izandla-nazo zonke izinto ezintsha
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Android 10 ene-UI 2.0 enye kwi-Samsung Galaxy S10 +: Izandla kunye nazo zonke izinto ezintsha
UhlaziyoUhlaziyo lwesoftware ngoku lukhuphela kuzo zonke i-S10 ezifanelekileyo, i-S10 +, i-S10e, i-Galaxy Qaphela i-10 kunye nezixhobo ze-10 + kwimimandla emininzi ngoku.
Isamsung ayaziwa ngokuthengisa uhlaziyo lwesoftware ye-Android ngokukhawuleza. Ngokwenyani, ibiphakathi kwabo bavelisi beefowuni bahlaziya izixhobo zabo ngokuthe chu, kwaye abasebenzisi kuye kwafuneka balinde iinyanga neenyanga ngaphambi kokuba ukukhutshwa kwe-Android enkulu kufike kwizixhobo zabo. Nangona kunjalo, i-2019 inokuba yindawo yokuguqula i-Samsung, ebonakala ngathi ikumkhondo wokuphula zonke iirekhodi zayo zokuhlaziya isoftware.
Umhlali wethu we-S10 + uhlaziyiwe nje kwi-Android 10 nge-UI 2.0 enye ebhodini. Yinyanga nje enye kunye neveki enye emva kokuba i-Android 10 ikhutshiwe ngokusesikweni ngoSeptemba 3. Ukuqengqeleka phantsi kwenombolo yemodeli ye-G975FXXU3ZSJ6 kunye nenqanaba lokhuseleko lika-Okthobha 1, uhlaziyo lwesoftware luyaqhayisa ngazo zonke izinto eziphambili ze-Android 10 eziya kuthi yenze ikhuphe okokugqibela kuthotho lweGPS S10.
Yintoni entsha & apos?
Masikhe sishwankathele utshintsho lwangempela ngokukhawuleza:
Izimbo zomzimba ezipheleleyo
Ukuphucula imo yesandla esinye
Imithombo yeendaba eNtsha kunye nezixhobo
Igrafu entsha yokusebenzisa ibhetri
Ukuphuculwa kweNtlalontle yeDijithali
Ukuphuculwa kwe-Intanethi ye-Samsung, Abafowunelwa, iKhalenda, Isikhumbuzi, iiFayile zam, ikhaltyhuletha
I-Android Auto ngoku ilayishwe kwangaphambili
Kususwe i-Android Beam
I-UI yekhamera ehlelwe ngokutsha, i-AR Doodle ifakiwe
Ukurekhoda kwescreen kunye nenqaku lokurekhoda le-selfie
Ngaphandle kwendlela, masikhe singene nzulu kwi-Android 10 kwi-Galaxy S10!
Inguqu epheleleyo ye-Android 10 yeGalaxy S10 +
I-Galaxy S10 Android 10 isoftware yokuhlaziya isoftware
Ukuza kuqikelelo lwethu olufundileyo, sicinga ukuba i-UI 2.0 beta enye kunye ne-Android 10 kufuneka ifike kwizixhobo ezifanelekileyo xa kuphela unyaka.
Ukuziva ngokubanzi kunye nokuvela
Ukuyishwankathela yonke, i-Android 10 nge-UI 2.0 enye ayiziva kwaye yahlukile kakhulu kwi-Android 9 nge-UI 1.1. Ngokwenyani, wena & ampos; uya kucinezelwa nzima ukuba uqaphele nayiphi na iyantlukwano eyothusayo ekuqaleni, kweyesibini, okanye nakwisithathu. Emva kwayo yonke loo nto, i-UI enye yenza amatyala ayo asemthethweni kwangoko kulo nyaka, kwaye khange silindele ukuba i-Samsung izokuza nolunye uhlengahlengiso ngokutsha ngexesha elifutshane. Sinento kanye ebesiyilindele ukuba siyifumane: isikhombisi esibonakala ngathi asitshintshanga kumbono obonakalayo. Ewe ezinye iinguqu ezifihlakeleyo zinokubonwa apha naphaya, kodwa xa zizonke, utshintsho alubonakali.
Inokuthi ivele njenge-cliche enkulu, kodwa uninzi lotshintsho luphantsi kwe-hood eziphucula okanye zonyusa ukusebenza kwesixhobo. Izinto ezinje ngeGoogle & apos; ukuhamba kwesimbo esitsha, ukuphuculwa kwezibalo zokhathalelo lwezixhobo, kunye neNtlalontle yeDijithali ngoku ziyinxalenye ye-UI enye, kodwa ukuba awukhe uzikhangele ungaze ubakhubekise.
Wamkelekile, izijekulo zikaGoogle!
Ekuqaleni, i-Samsung kunye ne-apos; yokuhamba ngokujonga isenzo yayikukupheka okuphekwe ngesiqingatha-abasebenzisi kwakufuneka balule umnwe wabo ukuya ezantsi kwisibonisi kwaye baswayipha babuyela umva, bagoduke, okanye bafikelele kwiiapps zabo zamva nje. Njengolwakhiwo lweqhosha lokukhangela elidala, iiSamsung kunye neapos; izixhobo zentsusa zokuhamba zazingumbandela nje owawuphantsi xa kuthelekiswa nolungelelwaniso olusekwe kwimpawu yabanye abavelisi.
Nge-Android 10, i-UI 2.0 enye inika abasebenzisi ukhetho olukhulu lokuhamba. Ngokuzenzekelayo, isebenzisa uGoogle & apos; ujongano, olusebenzisa ii-swipe ezisuka emacaleni nasezantsi kwaye ziyahambelana nezimbo zomzimba ze-iOS. Kukho & apos; ukhetho lwakudala lokuswayipha ukusuka ezantsi kwisibonisi ukuhamba ujongano, kwaye ukuba uyinyani, uyanyanzelisa, usenokusebenzisa amaqhosha amahle okuhamba. Izimbo zomzimba zikaGoogle & apos; ziphezulu kunezinye iindlela, sigqibe kwelokuba sizisebenzise ngokusisigxina.
Inqaku elitsha eliluncedo kakhulu kukuziva ubuyile ngasemva, okuvumela ukuba wenze isangqa sasemva xa usebenzisa iiapos; usebenzisa ityala elikhulu elenza ukubamba umphetho wesikrini ube nzima ngakumbi kunesiqhelo. Unokuvumela isenzo esingasemva kwikhibhodi, kodwa kuya kufuneka unike ngokucacileyo eli nqaku kuseto.
Izimbo zomzimba ezintsha kwi-Galaxy S10 + ene-Android 10 / One UI 2.0
Ikhamera entsha ye-UI
Ujongano lwenkqubo yekhamera nayo itshintshiwe ... kwaye ngoku yahlukile kancinci. Andiqinisekanga ukuba ndiyaluthanda olu tshintsho kunxibelelwano, kodwa ngokuqinisekileyo yinto ekufanele ukuba iyikhankanye. Kukho amanqanaba ama-stopgap zoom xa uswitsha phakathi kweekhamera ezahlukeneyo, kwaye kukho iiapos ze-doodle ezintsha ze-AR ezikhoyo kwikhamera ye-selfie.
Ukurekhoda kwesikrini esakhelweyo
Isamsung iphose into efanelekileyo yokurekhoda isikrini ekuvumela ukuba urekhode isikrini sakho kwi-480, 720, okanye kwi-1080p, kwaye uphinde uzirekhode ngekhamera ye-selfie ngendlela ehamba ngqo. Iluncedo kakhulu xa kufikwa kumdlalo wokurekhoda, kodwa yazi ukuba ujongano luthintitha kancinci ngelixa wena & apos; re rekhoda, imidlalo enzima kakhulu ye-3D iya kuba yinto ethe kratya kwintsebenzo iyonke.
Ukurekhodwa kwesikrini kwi-Galaxy S10 + nge-Android 10 kunye ne-UI 2.0 enye
Izenzo eziphakanyisiweyo zesaziso
Izaziso ezikrelekrele ze-Android kunye neapos ziye zamenywa kwiqela elinye le-UI 2.0. Ngoku bakrelekrele kwaye basebenza phantse nazo zonke ii -apps zemiyalezo onokucinga ngazo. Iimpendulo ezikrelekrele ngoku zicebisa iimpendulo ezazi imeko kunye ne-emoji ngqo kwizaziso zakho, ezenza ukuba uphendule ngokukhawuleza nangokufanelekileyo inkqubo elula kakhulu. Ukongeza, impendulo eyiSmart inokucebisa ngezenzo ezifanelekileyo: ukuba umntu othile ukuthumelela idilesi, kuya kuvela iqhosha, likuvumela ukuba uqalise ngokuthe ngqo kwiiMephu zikaGoogle kunye nedilesi ephambili. Kwaye akukho nto iyaphula umhlaba kodwa isenokuthathwa njengeyona nto incinci iya kukugcina ixesha apha naphaya.
Umthamo wesilayidi, owenziwe ngokutsha
Inqaku elinye elaphunyezwa ngaphandle komnye umenzi wefowuni ngaphandle kweGoogle uqobo yayizilayidi ezitshintshiweyo. Kubonakala ngathi wonke umenzi wefowuni ugqibe kwelokuba asebenzise eyakhe indlela yokusebenza esebenzayo kwaye aphume kuGoogle kunye neeapos ezicetyiswayo zokujonga izilayida zevolumu. Isamsung yahlukile - isilayidi esitsha sevolumu esine-UI 2.0 enye ilula kwaye icompact ngakumbi, ithatha indawo encinci yokuthengisa izindlu nomhlaba. Oopopayi bahlukile ngokunjalo.
Umthamo wesilayidi kwi-Galaxy S10 + ene-Android 10 (ekhohlo) kunye neGPS S10 ene-Android 9 (ngasekunene)
Ukuphuculwa koKhathalelo lwezixhobo kunye nezibalo zebhetri
Icandelo lebhetri kwi-submenu yoKhathalelo lwesiXhobo kwiiSetingi ziyilelwe ngokutsha kwaye ngoku bonisa lonke ulwazi kumcimbi omfutshane ngakumbi nococeko olubonakalayo. Izibalo zokusetyenziswa kwebhetri ngoku kulula ukuba zifundwe kunye nexesha lescreen yindlela ekulula ukuyibona kwimeko apho ufuna ukuziqhayisa ngebhetri yakho kunye nonyamezelo kwi-intanethi.
Ukhathalelo lwesixhobo kunye nezibalo zebhetri kwi-UI 2.0 enye
Umda webhetri ongenazingcingo
Ngoku unokuseta ipesenti ethile yebhetri apho ukhetho lwe-Wireless Powershare luya kuzikhubaza. Ngaphambili, inqaku lalingenakusebenza ngaphantsi kwe-30%, kodwa ngoku unokukhetha naliphi na inqanaba lebhetri phakathi kwe-30 kunye ne-90% ukucima ngokuzenzekelayo ukusebenza kwetyala lokutshaja ngaphandle kwamacingo.
Ukwabiwa kwamandla ngaphandle kwamacingo kwi-UI 2.0 enye
Imowudi yesandla esinye
Imowudi yesandla esinye ikwabonile notshintsho, ikakhulu kwindlela ofikelela ngayo. Ukwenza oko, kuya kufuneka uswayiphele ngqo ezantsi kwesikrini, engeyona ndlela inomdla yokwenza oku ... de ufumane ukuxhoma kuyo.
Imowudi yesandla esinye kwi-UI 2.0 enye
Isitshixo esivaliweyo kunye notshintsho oluhlala luboniswa
Ngoku kukho oopopayi abagudileyo phakathi kogcino oluhlala luhleli kunye nesikrini esitshixayo, esonyusa ubumbano lomdibaniso wonkana. Ukongeza, unokuba nayo kwi-bonisa i-icon yeminwe yokuskena ukuba usoloko uvuliwe, ukubonisa kuphela xa kusoloko kumboniso kuvuliwe, okanye ungaze ubonise. Oku kuyakunceda xa ufuna ukuvula ifowuni yakho ngokukhawuleza kodwa ungazifuni ngokungafanelekanga ujikeleze ukhangela indawo echanekileyo kumboniso.
Ukuphila kakuhle kwidijithali
Iipos ngoku kulula kunakuqala ukuseta iinjongo zexesha lescreen kwaye uzigcine zijongisene nemenyu entsha yeDigital Wellbeing kwiisetingi. Abazali banokugcina iithebhu kusetyenziso lwabantwana kunye nexesha lesikrini ngokunjalo.
Iinkqubo zesitokhwe zihlaziyiwe
Uninzi lwee-stocks luhlaziyiwe. Kwelinye, Abafowunelwa bafumana amanqaku kwi-Trash ukhetho oluza kugcina naziphi na izinto ezisusiweyo ukuya kwiintsuku ezili-15. Inkqubo yeKhalenda yamanqaku enkxaso kunye neenketho eziphambili kwizilumkiso zomnyhadala. Unokuseta izikhumbuzo ezisekwe kwindawo ethile yexesha elithile, kwaye ezinye iinketho ziya kubakho ukuphinda izikhumbuzo. Hi ndlela leyi, kukho & apos ngokutsha inqaku loMdaka kwiifayile zam ukhetho ngokunjalo. Ukuba uthanda ukuguqula iyunithi yesamsung ye-Samsung, awunokonwaba ukuyazi ngoku ixhasa isantya kunye neeyunithi zexesha ngokunjalo.
In entsha, phuma nendala
I-Android Auto ngoku iza kuqala ukulayishwa nge-UI 2.0 enye, ngelixa eyona nto iphambili kuyo i-Android- i-NFC Beam- iye yehliswa kuhlaziyo lwesoftware entsha.
cima iphone yokhuseleko yentloko
Isamsung ihambisa iPie ye-Android kwindawo yakudala yeGalaxy Tab S3
Uyikhuphela njani kwaye uyifakele i-iOS 11 kwi-iPhone yakho, kwi-iPad okanye kwi-iPod touch
Isilumkiso sabasebenzisi be-iPhone: iinethiwekhi zeWi-Fi ezinesihloko esinokuyaphula ifowuni kunye nokunxibelelana kweapos